ဘာသာရေး အရောင်ဆိုးထားတဲ့ ပညာရေးစနစ်ရဲ့အနိဋ္ဌာရုံ | AAS Burmese
by အောငျအောငျ January 29, 2019
by အောငျအောငျ January 29, 2019 348 views
ဓါတ်ပုံ - အောင်ကိုဦး ( မဇ္ဈိမ)
ဆရာတော် ဦးဝီရသူက အစိုးရပိုင်မြေပေါ်မှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့တားမြစ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး “မဟော်သဓာ အမျိုးသားရေးကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း” ဆောက်နေတဲ့သတင်းက လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဘာသာရေး အရောင်ဆိုးထားတဲ့ ပညာရေးစနစ်ရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံကိုတော့ သိသူ အင်မတန် နည်းပါလိမ့်မယ်။
ပညာရေးစနစ်မှာ ဘာသာရေး အရောင်ဆိုးခြင်းဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေက သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေက အဲဒီ လုပ်ရပ်ကို ၁၉၈၉ခုနှစ်ကနေ စတင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒါရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ အနိဋ္ဌာရုံကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ဖို့ နောက်ထပ် ၁၀နှစ်လောက် စောင့်ဆိုင်းရလိမ့်မယ်။
အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပမာ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်နေတဲ့ ရာဇဝတ်ကောင် ဝီရသူကို ကိုးကွယ်နေသူတွေနဲ့ သူ့လုပ်ရပ်တွေရဲ့အနိဋ္ဌာရုံကို မသိနားမလည်သူတွေကတော့ အမျိုးသားရေး ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ပညာရေးစနစ်မှာ ဘာသာရေး အရောင်ဆိုးခြင်းကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ၁၉၇၀ကျော်က စတင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံက လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေနဲ့ လူသတ်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပါ ခြွတ်ခြုံကျခဲ့တယ်။
အလားတူ ပညာရေးမှာ ဘာသာရေး အရောင်ဆိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေအားလုံးက အာဏာရှင်တွေ အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေးနဲ့ ခေတ်မီတိုးတက်ရေး အပိုင်းတွေမှာ နောက်ကျ ကျန်ရစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ၁၇ရာစုကစပြီး Secularism ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြတယ်။ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးမှ သီးခြားထားတဲ့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြတယ်။
ဘာသာရေးသမားတွေ လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို သူတို့မလုပ်ဘဲ သူတို့နားမလည်တဲ့ ပညာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်လာခြင်းဟာ အင်မတန် အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ အီရန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကို ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေ နေ့စဉ်ကြိုးပေး ကွပ်မျက်ခံနေရတာ သတင်းဖတ်သူတိုင်း သိကြမှာပါ။ ဘုန်းကြီးတွေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး မြင့်တင်ပေးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင် အစိုးရကျောင်းတွေကို စင်္ကာပူရဲ့ အစိုးရကျောင်းတွေလိုဖြစ်အောင် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် တစ်နေရာကနေ ကူညီသင့်တာပေါ့။
ခုတော့ ဘုန်ကြီးတွေလည်း စီးပွားဖြစ်ကျောင်းတွေ ဖွင့်လို့ဖွင့်၊ ဖွင့်တာလည်း ပြည်သူပိုင်နယ်မြေကို အဓမ္မသိမ်းယူပြီးမှ လုပ်ချင်တာ။ သဲတစ်မှုန်လောက် အသိတရားရှိတဲ့ သူတွေတောင် ဝီရသူကို ဘယ်သူခိုင်းနေတာလဲဆိုတာ သဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီက ရခိုင်ပြည်သွားပြီး ရခိုင်ဒုက္ခသည်ပိုများလာဖို့ သွေးတိုးလှုံ့ဆော်ခဲ့သေးတယ်။
ဘယ်ဘာသာဝင်ဘဲဖြစ်ပါစေ “အမျိုးဘာသာ သာသနာကာကွယ်မယ်” လို့ ကြွေးကြော်သူအများစုက သူတို့သာသနာရဲ့ image ကို ဖျက်ဆီးသူတွေသာ ဖြစ်ကြတယ်။
ဆရာတျော ဦးဝီရသူက အစိုးရပိုငျမွပေျေါမှာ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရရဲ့တားမွဈခကျြကို ဆနျ့ကငျြပွီး “မဟျောသဓာ အမြိုးသားရေးကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျး” ဆောကျနတေဲ့သတငျးက လူတိုငျးသိပွီးဖွဈပမေယျ့ ဘာသာရေး အရောငျဆိုးထားတဲ့ ပညာရေးစနဈရဲ့ အနိဋ်ဌာရုံကိုတော့ သိသူ အငျမတနျ နညျးပါလိမျ့မယျ။
ပညာရေးစနဈမှာ ဘာသာရေး အရောငျဆိုးခွငျးဟာ စဈအာဏာရှငျတှကေ သူတို့ရဲ့အာဏာတညျမွဲရေးအတှကျ လုပျလလေု့ပျထရှိတဲ့ လုပျရပျဆိုးတဈခုပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ စဈအာဏာရှငျတှကေ အဲဒီ လုပျရပျကို ၁၉၈၉ခုနှဈကနေ စတငျခဲ့ပမေယျ့ အဲဒါရဲ့အကြိုးဆကျနဲ့ အနိဋ်ဌာရုံကို ထငျထငျရှားရှားတှမွေ့ငျဖို့ နောကျထပျ ၁၀နှဈလောကျ စောငျ့ဆိုငျးရလိမျ့မယျ။
အကွမျးဖကျ ခေါငျးဆောငျတဈဦးပမာ တကျတကျကွှကွှ လုပျနတေဲ့ ရာဇဝတျကောငျ ဝီရသူကို ကိုးကှယျနသေူတှနေဲ့ သူ့လုပျရပျတှရေဲ့အနိဋ်ဌာရုံကို မသိနားမလညျသူတှကေတော့ အမြိုးသားရေး ကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျးတှကေ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှအေတှကျ အကြိုးရှိလိမျ့မယျလို့ ထငျကွတယျ။ ပညာရေးစနဈမှာ ဘာသာရေး အရောငျဆိုးခွငျးကို ပါကစ်စတနျနိုငျငံမှာ ၁၉၇၀ကြျောက စတငျခဲ့တယျ။ အဲဒီနိုငျငံရဲ့ အနိဋ်ဌာရုံက လူမြိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက်ခတှနေဲ့ လူသတျပှဲတှပေဲဖွဈပွီး နိုငျငံရဲ့စီးပှားရေးပါ ခွှတျခွုံကခြဲ့တယျ။
အလားတူ ပညာရေးမှာ ဘာသာရေး အရောငျဆိုးထားတဲ့ နိုငျငံတှအေားလုံးက အာဏာရှငျတှေ အုပျခြုပျတဲ့နိုငျငံတှဖွေဈပွီး စီးပှားရေး၊ နိုငျငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉျကြေးမှု၊ ပညာရေးနဲ့ ခတျေမီတိုးတကျရေး အပိုငျးတှမှော နောကျကြ ကနျြရဈနတော တှရေ့တယျ။ အနောကျနိုငျငံတှမှော ၁၇ရာစုကစပွီး Secularism ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ကငျြ့သုံးလာခဲ့ကွတယျ။ ဘာသာရေးကို နိုငျငံရေးမှ သီးခွားထားတဲ့အတှကျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာခဲ့ကွတယျ။
ဘာသာရေးသမားတှေ လုပျရမယျ့အလုပျကို သူတို့မလုပျဘဲ သူတို့နားမလညျတဲ့ ပညာရေးနဲ့ နိုငျငံရေးမှာ ပါဝငျလာခွငျးဟာ အငျမတနျ အန်တရာယျကွီးတယျ။ အီရနျနိုငျငံရဲ့နိုငျငံရေးကို ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျတှေ ခြုပျကိုငျထားတဲ့အတှကျ ပွညျသူတှေ နစေ့ဉျကွိုးပေး ကှပျမကျြခံနရေတာ သတငျးဖတျသူတိုငျး သိကွမှာပါ။ ဘုနျးကွီးတှေ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပညာရေး မွငျ့တငျပေးခငျြတဲ့ဆန်ဒရှိရငျ အစိုးရကြောငျးတှကေို စင်ျကာပူရဲ့ အစိုးရကြောငျးတှလေိုဖွဈအောငျ အုတျတဈခပျြ သဲတဈပှငျ့ တဈနရောကနေ ကူညီသငျ့တာပေါ့။
ခုတော့ ဘုနျကွီးတှလေညျး စီးပှားဖွဈကြောငျးတှေ ဖှငျ့လို့ဖှငျ့၊ ဖှငျ့တာလညျး ပွညျသူပိုငျနယျမွကေို အဓမ်မသိမျးယူပွီးမှ လုပျခငျြတာ။ သဲတဈမှုနျလောကျ အသိတရားရှိတဲ့ သူတှတေောငျ ဝီရသူကို ဘယျသူခိုငျးနတောလဲဆိုတာ သဘောပေါကျလိမျ့မယျ။ မကွာသေးမီက ရခိုငျပွညျသှားပွီး ရခိုငျဒုက်ခသညျပိုမြားလာဖို့ သှေးတိုးလှုံ့ဆျောခဲ့သေးတယျ။
ဘယျဘာသာဝငျဘဲဖွဈပါစေ “အမြိုးဘာသာ သာသနာကာကှယျမယျ” လို့ ကွှေးကွျောသူအမြားစုက သူတို့သာသနာရဲ့ image ကို ဖကျြဆီးသူတှသော ဖွဈကွတယျ။
It would be better if #Myanmar authority or International Community kill us instead of torturing without food, medi… https://t.co/Fgzpir4Wx9
490 #Rohingya IDP urgently need food ============== 106 Rohingya families from Anauk Ywe village of Pauktaw (cont) https://t.co/fA8hNjUn7L
No matter who recognize or not, we are facing #Genocide. That's reality. https://t.co/cOlEbVjbVY
တိုင်းရင်းသားအားလုံး တန်းတူအခွင့်အရေးအတွက်အော် AA က “အဖနိုင်ငံတော်အတွက် ဆော်”
AA NLD အစိုးရ ကမန်တိုင်းရင်းသား ဂျီနိုဆိုဒ် စစ်အာဏာရှင်များ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တရုတ် ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး မင်းအောင်လှိုင် မုဒိန်းတပ်မတော် မွတ်စလင် ရခိုင် ရခိုင်အရေး ရခိုင်ပြည်နယ် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အဝကျွန်းသားရခိုင် အာနန်ကော်မရှင် အိခ်လားဆွ် အိမ်ထောင်စုစာရင်း အိုင်စီစီ ဦးရဲထွဋ် ဦးသိန်းစိန် ဦးနေဝင်း ဦးအောင်ဇော်ဝင်း ဇော်ဋ္ဌေး ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့် ဒေါက်တာမျိုးညွှန့် ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ် ဒေါက်တာမောင်ဇာနည် ဒေါက်တာအေးမောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေရပ်စွန့်ခွာ မိသားစုဝင် ပေါက်တော မောင်တောအကြမ်းဖက်မှု လှေစီးဒုက္ခသည် အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်မင်္ဂလာအကျဉ်းစခန်း မြေပုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ၀ီရသူ ၉၆၉ နဲ့ မဘသ နိုင်ငံသား